Serasera 6000 momba an'i Sennheiser dia manolotra matihanina avo lenta amin'ny famoahana audio Audio NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner sy mpamokatra ny NAB Show LIVE. News Engineering Engineering
Home » Featured » Sennheiser's 6000 Series Manolotra Broadcast Professionals ho an'ny kalitao avo lenta
Ireo singa hita maso amin'ny fampisehoana dia zava-dehibe amin'ny asa ataon'ny fampielezam-peo rehetra rehefa mampiroborobo ny marika. Na izany aza, raha tsy mifanaraka amin'ny kalitaon'ny hatsaran'ny fahitana ilay fampisehoana, dia mety hanoroka veloma ny mpihaino azy koa ilay mpamorona. Ny fomba fanolorana famelabelaran-kevitra amin'ny raharaha mahazatra. Saingy ny kalitaon'ny feo dia tokony hatonina amin'ny ambaratonga mitovy sy ny orinasa toa an'io Sennheiser Electronic Corporation adiresy izay miaraka amin'ny headphone, fanamafisam-peo, mikrofonony ary rafi-pandefasana tsy misy tariby.
Koa satria Sennheiser naorina indray tao 1945, ny orinasa dia manam-pahaizana manokana amin'ny famolavolana sy ny fanomezana ireo mpampiasa azy ho marika marobe famindram-po avo lenta vokatra, izay misy mikrô, écouteur, telephone kojakoja, ary fiaramanidina headset ho an'ny tena manokana, matihanina, sy ny fampiharana amin'ny raharaham-barotra.
Sennheiser mamorona vokatra audio ampiasain'ny mpampiasa iray rehefa mihaino mozika sy mandritra ny fihaonambe na fivoriana. Izany dia tanteraka amin'ny alàlan'ny famolavolana feo izay tsy hain'ny olona mandre fa toa mahatsapa ihany koa, izay mihoatra ny fahatokisan'ny vokatra mahazatra izay arahan'ny ankamaroan'ny orinasa audio. Ny sennheiser dia mikendry ny hanatanteraka ny vinaviny amin'ny famolavolana ny ho avin'ny audio ary mamorona traikefa tsy manam-paharoa ho an'ny mpampiasa azy. Ary miaraka amin'ny andiany nomerika 6000, ho vitany izany.
Sennheiser ny andiany nomerika 6000 tsy misy fanelanelanana. Manome fantsona sy fampisehoana bebe kokoa ho an'ny mpampiasa izany. The Andiany nomerika 6000 mametraka fenitra vaovao eo amin'ny tontolon'ny RF miaraka amin'ny asa tsy misy intermodulation, grid matetika mitovy habe ary fampitana azo antoka manokana. Ity andiany ity dia tsy manome afa-tsy feo avo lenta avo lenta miaraka amin'ny maody lava be ary koa ny fahaizana mampitombo avo roa heny ny fantson'ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny maody vaovao misy ny rohy, izay mampitombo ny fahafaha-miasa na dia ny tontolo RF tena sarotra aza.
Miaraka amin'ny mpandefa namolavola ho an'ny fangatahana rehetra, Digital 6000 dia mitovy an-trano eny an-sehatra, na amin'ny studio na eny an-tsaha. Ho an'ny fangatahana malina indrindra, ny vaovao SK 6212 mpandefa mini-bodypack nanjary safidy tsara indrindra ho an'ny mpamorona feo sy matihanina matihanina
Maromaro amin'ireo andian-dahatsoratra 6000 an'i Sennheiser manomboka amin'ny karazana vokatra audio toa ny:
Ny L 6000 (Manome ny andiany Digital 6000 sy Digital 9000 miaraka amin'ny fanitarana sy fiantsonana azo ampiharina sy mahira)
Ny EM 6000 (Mpandray fantsom-pifandraisana nomerika 2 momba ny famokarana sy famindrana mivantana)
Ny SK 6000 (Fantsona misimisy kokoa, fampitana fampitana tsara kokoa: mpindrana kitapom-bolan'ny intermodulation)
Ny L 6000
The L 6000 miasa ho toy ny tobim-pandefasana azo ampiharina, afovoany ary manan-tsaina izay manome hery eo afovoany sy mivantana ao anaty talantalana. Ity fitaovana ity dia manana modely enina voafidy efatra voafantina malalaka izay mahazaka fonosana bateria roa na fonosana tanana tsirairay (totalin'ny seranan-tsambo miisa 8 ho an'ny kitapom-batsy BA 60, BA 61 na BA 62). Izy io koa dia manana LED miloko telo izay manome ny mpampiasa topy topimaso haingana momba ny satan'ny fiampangana. Ny rafitra fanaraha-maso manan-tsaina ao amin'ny L 6000 manakana ny fananganana hafanana ary manolotra fomba iray izay miantoka tsara ny batery mandritra ny fotoana fitahirizana lava. The L 6000 dia manana fananganana modular ary futureproofed izany, izay mamela ny serivisy fanakorontanana ho an'ireo karazana fonosana bateria ho avy averina mora kokoa.
Fampahalalana fanampiny an'ny L 6000 ahitana:
Fiantsonana fiampangana 19 inci amin'ny 1 RU
Ny fanamafisana mora azo miaraka amina maimaim-poana ho an'ireo mpindrona tanana miasa na fonosana bateria bodypack (Digital 6000 ary Digital 9000)
Ny fomba fijery haingana momba ny saran'ny famerenany miaraka amin'ny LED miloko telo
Ny fifehezana ny fiampangana manan-tsaina miaraka amin'ny mpankafy efatra ho an'ny hatsiaka farany
Fomba fitehirizana mihazona ny fonosan'ny bateria amin'ny fepetra raikitra indrindra mandritra ny fotoana fitahirizana maharitra
Ny fampidirana ao amin'ny Wireless Systems Manager
Mianara bebe kokoa amin'ny fitsidihana en-us.sennheiser.com/charging-station-microphones-transmitter-l-6000.
Ny EM 6000
The EM 6000 manana fantsom-pidirana avo kokoa ary fahazoana antoka tsara indrindra. Io fitaovana io dia tsy misy haingam-pandehanana sy ny vahindany mitovy amin'ny farafahakeliny dia manome fahombiazana mahavariana sy ny fanamafisana faran'izay tsotra indrindra, na inona na inona tontolo iainana. Endri-javatra hafa an'ny EM 6000 ampidiro ny fanitsiana diso sy ny fanamafisam-peo amin'ny alalàn'ny feo izay manampy amin'ny fahalalana sy mamaha ireo olana ela alohan'ny hahatongavan'izy ireo. Rehefa tonga amin'ny fananganana sy ny mpampiasa interface tsara, ilay EM 6000 dia voafaritry ny mazava, ny fifandraisan'ny olona ary ny làlana fohy.
The EM 6000 azo ampidirina amina tsy misy fotony amin'ny fotodrafitrasa misy dizitaly na analog. The EM 6000 dia manana ihany koa famokarana nomerika AES-3 misy famoahana famokarana sy famoahana famantaranandro, famokarana avo lenta, XLR analaho avo lenta, ary output 6.3 mm jack ary koa famoahana fonon-doha 6.3 mm.
Ho fanampin'ny fiarahana amin'ireo rafitra antenaina UHF Sennheiser, ny EM 6000's endri-javatra dia ahitana:
Mpandray an-tserasera 19 '' 2-Channel, 19 inci 1RU
Bandy lehibe 244 MHz mihodina
Ny fomba maoderina Long Range (LR) amin'ny alàlan'ny audio codec (SeDAC) avy amin'ny sanganasa Digital 9000
Link Density Mode (mode LD) miaraka amin'ny Audio Codec (SePAC) mahomby amin'ny fanamafisana dia miantoka fantsona 5 isaky ny bandwidth MHz
Mianara bebe kokoa amin'ny fitsidihana en-us.sennheiser.com/microphone-digital-audio-receiver-live-production-em-6000.
Ny SK 6000
The SK 6000 dia famindrana poketra tsy miovaova ka ahafahana miasa amin'ny takelaka miitatra. Na amin'ny elanelam-pisaka mahery vaika indrindra aza, ny foto-kevitra momba ny fifindran'ny mpandefa dia mamela ny fahombiazan'ny fahitana ambony indrindra. Amin'ny teny tsotra, izany dia midika fa miditra amin'ny fantsona maro kokoa ny mpampiasa, fampitana fampitana farany indrindra amin'ny fotoana rehetra, ary fitoniana famantarana miavaka. Io fitaovana io dia tohanan'ny Sennheiser Digital Audio Codec (SeDAC), izay manome antoka mazava sy tsy misy artifact ary dynamics optimum.
The SK 6000 no vahaolana farany ambony ho an'ny gitara / bass na ho mpandefa ny Sennheiser clip-amin'ny mikrofona MKE 1, MKE 2 ary MKE 40, headset HSP 2, HSP 4 ary SL Headmic.
Fampahalalana fanampiny an'ny SK 6000 ahitana:
Fiovana telo matetika (470-558 MHz, 550-638 MHz, 630-718 MHz)
Ny mpamatsy sennheiser 3-pin dia ahafahana mifandray amin'ny mikrofona isan-karazany na fitaovana iray
Fiarovana an-tsehatra mahomby
Fampitaovana AES 256 sy encryption Digital 9000
Mifanaraka amin'ny EK 6042 sy EM 9046 amin'ny fomba Long Range
Ny fonosana bateria Li-ion misy fotoana maharitra 6.5 ora
Ho fanampin'ireo zava-misy ireo dia Mpitaovana SK 6000 dia mifanentana amin'ny EK 6042 ary ny EM 9046 amin'ny fomba Long Range.
Mianara bebe kokoa amin'ny fitsidihana en-us.sennheiser.com/pocket-transmitter-microphones-instruments-sk-6000.
Izay azon'i Sennheiser mampanantena amin'ny fampielezam-baovao
Izay matihanina miasa amin'ny indostrian'ny fampielezam-peo dia tsy mila fampisehoana mahafinaritra ny atiny hita maso fotsiny. Saingy, mba hialan'ny marika, ny fananana feo avo lenta tafiditra ao anatin'ny fampisehoana dia mampitombo ny fahafahan'izy ireo mampiroborobo ny marika sy manangana mpihaino marobe kokoa. Izay no Sennheiser tonga. Tao anatin'ny 75 taona, ity orinasam-pifandraisana ity dia nanolotra ny indostrian'ny fampahalalam-baovao amin'ny endriny vaovao amin'ny fihainoana, traikefa amin'ny feo tsara, ary fotoana izay hampisy fientanam-po lehibe ho an'ny mpampita vaovao satria mampiasa tanteraka ny fikaonandoham-bokatra ho an'ny headphone, fanamafisam-peo, mikrofonony ary rafitra fifampitana tsy misy fotony izay mahatonga ity orinasa mpanamboatra eran-tany ity.
Mianara bebe kokoa momba Sennheiser amin'ny fitsidihana en-us.sennheiser.com/.
fampitana orinasa fahitalavitra Digital 6000 EM 6000 écouteur L 6000 fomba fanovana fifandraisana fanamafisam-peo mikrô Sennheiser Sennheiser Digital Codec Audio Sennheiser Electronic Corporation SK 6000 SK 6000/9000 SK 6212 mpandefa mini-bodypack SKM 6000 rafitra fifindrana tsy manara-dalàna 2020-05-30
Previous: Ny fampisehoana vaovao an'ny TVU Networks ho an'ny famokarana ara-tsosialy dia ahafahan'ny serasera misy ifandraisany sy ny fifandraisana manokana eo amin'ny famokarana crew sy talenta
Next: A1now dia mifidy ny vahaolana amin'ny Vionlabs AI-mahery ho an'ny soso-kevitra mijery manokana